MMỤỌNWỤ ETIGBUELA MMADỤ N’ỤLỌ ỤKA – hoo!haa!!
Ana-atụ ụjọ na otu onye nwụrụ pịịị ebe ihe karịrị mmadụ iri abụọ na abụọ ndi ọzọ merụrụ ahụ n’ụzọ dị iche iche mgbe ndi mmọụnwụ nuru n’igwe wakpo ndi ụka n’ebe ha na-eme ekpere na HolyGhost Adoration Ministry, Uke, n’okpuru ọchịchị gọmenti ime obodo Idemili, na steeti Anambra.
Ndi mmụọnwụ ndia ekwuru na ha na-eme mmemme oriri akpọrọ Ụzọ Iyi, ka-ekwuru na ha wakporo ụlọ ekpere a n’igwe. Ekwukwara na ha tiri ọtụtụ ndi mmadụ ihe mgbe ha na-agba mbọ ikpụrụ onye isi ụlọ ụka ahụ bụ ụkọchukwụ Emmanuel Obimma.
Akụkọ anyị nwetara kwuru na ndi uwe ojii, ngalaba na-egbochi ipụnarị ihe n’iké (SARS) biara kpụrụ ndi mmụọnwụ atọ n’ime ha mgbe ndi ụka kpọkuru ha ma gwa ha ka ndi otu mmụọnwụ a si kwụchie ụzọ ma na-eti ndi gaje ụlọ ụka ahụ ihe ka ana-anwụ anwụ, ma na-anakwa ha ihe ha ji aga ụka.
Ọ bụ ndi ụka ahụ kpọrọ ndi uwe ojii, bụ ndi nke biara nwude atọ n’ime mmụọnwụ ndia. Ndi otu mmụọnwụ a gbara nnukwu mbọ igbochị ndi uwe ojii ịkpụrụ mmụọnwụ ndia ejidere. Nkea butera ndi uwe ojii jiri gbaliwe egbe n’enu aghara aghara ma mechaakwa kpụrụ mmụọnwọ atọ ndia.
Onye enyem-aka ụkọchukwu Obimma bụ Mazị Francis Okoye gwara ndi nta akụkọ na ụkọchukwu Henry Nnajiọfọ, nwata akwụkwọ seminarị nakwa mmadụ iri abụọ na asatọ ndi ọzọ nwetara nnukwu mmerụ ahụ site na nnwakpo a.
Ekwukwara na otu onye amatabeghị aha ya ka ana-atụ egwu na ọ nwụnyụrụ anya site na kata kata so nnwakpo ahụ.
Mazị Okoye sịrị na ọ tụrụ n’anya ka ndi mmụọnwụ a siri nọfere elekere isii ha ji emechibu mgbe ndi ọzọ ana-eme oriri ha. O kwukwara na ha biara kwụchie ụzọ were na-ana ndi mmadụ ihe ha ji abia ụka n’ụdị na ha na-eme mmemme oriri mmụọnwụ ha.
Ọ sịrị na ihe dịka elekere asatọ na ọkara ka ha bidoro nwetewa ozi na ndi mmụọnwụ kwụchiri ndi ụka ha ụzọ were na-ana ha ihe ha n’iké ma na-emerụkwa ụfọdụ ahụ. Ọ sịrị na-etiri ufọdụ n’ime ha ihe ma gbukwa ndi ọzọ mma.
Akụkọ kwuru na ihe bụ ebum n’obi ndi mmụọnwụ a bụ imekpa ụkọchukwu Obimma ahụ mana ndi ọrụ nchekwa ụlọ ụka ahụ dị n’aka tinyekwara ndi mmadụ ọzọ jiri onwe ha mere ihe mgbochi nyere ndi mmụọnwụ ahụ.
Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndi uwe ojii steeti Anambara bụ Nkiru Nwode kwuru na akụkọ a bụ ihe mere eme. Mana ọ sị na ndi mmụọnwụ a alụsoghị ndi uwe ojii (SARS) ọgụ.
Ọ sịrị na ndi ụwe ojii jidere mmadụ atọ ana-enyo enyo maka mkpọtụ a, ma kwukwa na-aka na-esi imi n’ala ṅịmata ka mmiri siri baa n’opi ụgbọgọrọ.
Previous Post: ENWERE IKE AGAGHỊ AKWỤGBU EMEKA EZEUGO
Next Post: BISHỌP EKPURULA NKATA N’ISI GWA BUHARI OKWU